ShweMinThar: ဝိတ်ချရင်းနဲ့ ဝိတ်မကျဖြစ်နေပြီလား?
ခေတ်ကာလ ပြောင်းလဲမှု့အရ လူတော်တော် များများ ကလည်း ကျန်းမာရေးကို ဂရုတစိုက်ရှိလာကြပါတယ်။
အဝလွန်ခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကို သိလာတာ နှင့်လအမျှ လူ အများကလည်း ကျန်းမာရေးရှု့ထောင့် အနေနဲ့ ကော အလှအပရေးရာ ရှု့ထောင့် အနေနဲ့ပါ ဝိတ်လျှော့ လာကြပါတယ်။
အများစု အကြမ်းဖြင်း သိထားတာ ကတော့ ဝိတ်လျှော့ရင် အစားလျှော့ တာနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာမျိုးပါ။
ဒီတစ်ခေါက်ဆောင်းပါး မှာတော့ ဝ်ိတ်ချတဲ့နေရာ မှာ ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်တဲ့ အမူအကျင့် လေးတွေ အကြောင်း ကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
1. ကယ်လိုရီ တွက်စားတတ်တဲ့ အကျင့်ကို လုပ်ပါ။
ကိုယ်ဘာစားစား ကယ်လိုရီ တွက်တတ်တဲ့ အကျင့် ကိုလုပ်ပါ။ အခုနောက်ပိုင်း မုန့်တော်တော် များများ မှာ လည်း ကယ်လိုရီ တွက်ပြပေးထားတတ်ပါတယ်။ အစားအသောက် တော်တော် များများ(အထူးသဖြင့် မြန်မာ အစားအစာတွေ) ရဲ့ ကယ်လိုရီ ကိုတော့ တက်နိုင်သလောက် ကျွန်တော် ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
2. မိမိ တနေကုန် စားထား သမျှ ကို ချမှတ်ထားပါ။
တနေကုန်စားထား သမျှ ကို နေ့စဉ် ဒိုင်ယာရီ သဘောမျိုး ချရေးခြင်းပာာ လည်း ဝိတ်ချတဲ့ နေရာ မှာ တော်တော်လေး အသုံးဝင်ပါတယ်။ ချရေးလိုက်ခြင်းဖြင့် မိမိဘယ်လောက်တောင် စားလိုက်မိပြီ ဆိုတာ ကို ဦးနှောက်ကို သတိပေးသလိုမျိုးဖြစ်စေတဲ့အတွက် ကြောင့်ပါ။ အဲ့လိုချရေးတဲ့ နေရာ မှာလည်း ရေးဖို့သတိရပြီ ဆိုတာနဲ့ ချရေးပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အဲ့လို မလုပ်မိဘဲ ညအိပ်ခါ နီး မှ အကုန်ချမှတ်မိတယ် ဆိုရင် တနေကုန်စားထားတာ မှတ်မိဖို့လည်း ခက်သလို ကိုယ်စားတာ များနေပြီဆိုရင်တောင် အိပ်ခါနီး ဖြစ်သွားတော့ အဲ့ဒီ တစ်နေ့ အတွက် ပြန် ထိန်းလို့မရသလို ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
3. အိမ်မှာပေါ့ပေါ့ပါးပါး အလုပ်လေးတွေ လုပ်ခြင်း
အိမ်ပြန်ရောက်ပြီ ဆိုတာ နဲ့ လူအများစု က ပင်ပန်းပြီး ဘာမှ မလုပ်ချင်တော့ဘဲ တစ်နေရာတည်းမှာ ထိုင်ပြီး ရုပ်ရှင်ကြည့် ဖုန်းသုံးတတ် တဲ့ အကျင့် ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အငြိမ် ထိုင်မနေဘဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်စေ မယ့် လှုပ်ရှားမှု့မျိုး ဥပမာ တီဗွီ ကြည့်ရင်း အလေးတုံးအသေးမတာမျိုး ဖုန်းပြောရင်း လမ်းလျှောက်တာ မျိုးစတာတွေ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
အိမ်မှာ နေရင်း လည်း တခြားအိမ်မှု့ကိစ္စ လေးတွေ လုပ်တာလည်း ဝိတ်ချတဲ့နေရာ မှာ တော်တော်လေး အကျိုးရှိပါတယ်။ ဥပမာ တံမြတ်စည်းလှည်းတာ ကြမ်းတိုက်တာ ဖုန်သုတ်တာမျိုးလေးတွေ လုပ်ပေးတာမျိုးပေါ့။
4. မလိုအပ်တဲ့ ခရီးကို ကားမသုံးပဲ လမ်းလျှောက်ပါ။
တော်ရုံတန်ရုံ ခရီးဂအကွာအဝေး မျိုးကို လမ်းလျှောက်သွားတတ် အကျင့် လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ဝိတ်ကျစေနိုင်သလို အဆုတ်နှင့် နှလုံး လုပ်ဆောင်ချက်ကို လည်း သိသိသာသာ တိုးတက်လာစေပါတယ်။
5. Food Label ဖတ်တတ်တဲ့ အကျင့်လုပ်ပါ။
စူပါမားကတ် တွေမှာမုန့်တွေဝယ်မယ် ဆိုရင် ကယ်လိုရီ ဘယ်လောက်ပါလဲ Carbohydrate, Protein , Fat ဘယ်လောက်ပါလဲ တွေကို ရေးထားတဲ့ food label တွေကို ဖတ်တတ်တဲ့ အကျင့် ရှိဖို့တော့လိုပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ဖတ်တဲ့နေရာမှာ များသောအားဖြင့် serving size (တစ်ခါစားပမာဏ) နဲ့ ရေးထားတတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ မုန့်တွေ က တစ်ထုပ်တည်း နဲ့ တစ်ခါစားပမာဏ ပါဝင်တာမျိုး မပာုတ်ဘဲ ၂-၃ ခါစာလိုမျိုးတွေ ပါတတ်ပါတယ်။ ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ ကယ်လိုရီ ပမာဏ ကို သေချာတွက်ကြည့်ဖို့တော့လိုပါတယ်။
6. Zumba Dance ကခြင်း
အခုရက်ပိုင်း ခေတ်စားလာတဲ့ Zumba Dance ကို ၁၅ မိနစ် က ပေးပါက ကယ်လိုရီ ၂၀၀-၃၀၀ လောင်ကျွမ်းစေပါတယ်
ဘာကြောင့် ဒါတွေ ကျွန်တော် လုပ်ခိုင်းနေတာလဲ ဆိုတော့ အခုနောက်ပိုင်း ဝိတ်ကျပြီး စားတာနဲ့ ပြန်တက်နေတယ် ဆိုပြီး ခဏခဏ ကြားနေရပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အစားအသောက်ပဲ လျှော့ပြီး ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား သိပ်မလုပ်ဖြစ်တော့ BMR (တစ်နေ့တာ လိုအပ်တဲ့ ကယ်လိုရီ ပမာဏ) က တဖြည်းဖြည်း ကျလာပြီး နည်းနည်းစားတာ နဲ့ ပြန်ပြန်တက်လာတာပါ။
BMR (တစ်နေ့တာ လိုအပ်တဲ့ ကယ်လိုရီ ပမာဏ) ပြန်တက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ????
အဓိက ကတော့ ပုံမှန်လှုပ်ရှားသွားလာမှု့ လုပ်ပေးရပါမယ်။ ဒါမှလည်း ခန္ဓာကိုယ် က ဆဲလ် တွေ က အလုပ်ပို လုပ်ပြီး Energy ပိုသုံး လာတဲ့ အတွက် ကယ်လိုရီ ပိုလိုအပ်လာပါတယ်။ ကယ်လိုရီ ပိုလိုအပ်လာတော့ ကယ်လိုရီ များများစားမိလည်း ခန္ဓာကိုယ် က ပြန်လည် အသုံးချ နေတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဝိတ်ပြန်မတက်နိုင်တော့ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အလွန်အကျွံ စားရင်တော့ ပြန်တက်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဝိတ်ချ နေတဲ့ သူတွေ အတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နဲ့ လိုက်ကလို့ရတဲ့ Zumba Dance video ကို ပြန်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ၂-၃ ခါလောက်လိုက်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဝိတ်လျှော့တဲ့နေရာ မှာ အစားတစ်ခုတည်း နဲ့ လျှော့တာထက် အခုလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နဲ့ လိုက်လုပ်လို့ရတဲ့ Zumba Dance လိုမျိုးတွေ တစ်နေ့ကို မိနစ် ၃၀ လောက် လမ်းမြန်မြန်လျှောက်တာမျိုးတွေ ပါ တွဲဖက် လုပ်ပေးမှ နောင်ရေရှည် မှာ ဝိတ်ဆက်ထိန်းနိုင်မှာပါ။
ဒေါက်တာ ညီညီကျော် @ Dr. Nutrition
Credit: Dr.Nutrition Page
Daily caloric requirement ကိုတွက်တဲ့ formula တွေ အများကြီးရှိတဲ့ထဲက တွက်ရလွယ်မယ့် formula တခုကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...
Current weight in lb x 11 = baseline calorie
Baseline calorie + 400 ( fix calorie burn ) = caloric need
Caloric need - 750 ( caloric deficit ) = targeted calorie
Example အနေနဲ့ တွက်ပြရရင် Cas ဆို ပေါင် ၁၄၀ ရှိပါတယ်........
140 x 11 = 1540
1540 + 400 = 1940
1940 - 750 = 1190
ဒါဆို ပေါင် ၁၄၀ ရှိတဲ့ သူတယောက်ရဲ့ နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ calorie ပမာဏက 1190 ပါ......
Calorie 3500 ပိုတိုင်း 1 lb ပေါင်တက်ပါတယ်........
ဒါဟာ weight ချနေတဲ့ သူတွေ တင် သိသင့်တာမဟုတ်ပါဘူး............. Gym ဆော့ပြီး weight တင်နေတဲ့ bro တို့လည်း သိသင့်ပါတယ်.....
ကိုယ့်ရဲ့ daily requirement ကိုသိထားတော့ လိုတယ် ပိုတယ် မဖြစ်ရလေအောင် ခုပဲ တွက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်..........
Orchard Aesthetique Mandalay
Credit: Tips & Tricks by Castiel
Posted by Alex Aung at 12:20 PM
Labels: ၀ိတ်ချနည်းများ, Health
ဒိန်​ချဉ်​ - ငှက်ပျောပေါင်း - နှမ်းအနက်ကပ် မုန့်ြေ...
Cho Hee-pal ( ဂျို ဟီး ဖားလ် ) သို့မဟုတ် ပိရမစ် ရ...
ပျော်တော်ဆက်ရသော မိန်းမလှလေးများအဖွဲ့ (Pleasure Sq...
Bone tuberculosis (အရိုး တီဘီ)
ဆန်ခေါက်ဆွဲကြော်နဲ့ ကွေ့တီယို လုပ်စားရအောင်
How to lose chest fat and get rid of " Man Boobs"
Cystic Acne ဆိုတာ ဘာလဲ ??
ကယားဝက်စွပ်ပြုတ် - ငါးကြင်းပေါင်း - စီချွမ်စတိုင်လ...
ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြု ကာဗွန်ဟိုက်ဒြိတ်များ ရွေးချယ်စ...
လိင်ဆက်ဆံမှု မရှိတော့ဘူးဆိုရင် (No Sex)
သဘာဝမြေသြဇာ - တိုင်းရင်းပိုးသတ်ဆေးပြုလုပ်နည်း - ရေ...
Company နှင့် Trading ဆိုင်ရာ အခွန်အရပ်ရပ်
ဘာကြောင့် ၀န်ထမ်းလေ့ကျင့်မှုတွေဟာ လက်လီလုပ်ငန်းများ...
ရေယုံပေါက်ခြင်း (Herpes Simplex)
⏩GYM မသွားခင်သိစေချင် (အပိုင်း-၃)⏪